Mpiray tsikombakomba amina fikambanan-jiolahy… : zandary roa lahy nahatrana Kalach, bala, vola sandoka | NewsMada
Mpiray tsikombakomba amina fikambanan-jiolahy… : zandary roa lahy nahatrana Kalach, bala, vola sandoka
Par Taratra sur 07/03/2017
Miasa ao amin’ny Groupement Analanjirofo ireto zandary roa lahy ireto. Ankoatra ny basy Kalachnikov sy bala maromaro, nanaovana asan-jiolahy ary hita tany amin’izy ireo, voalaza fa mbola nahatrarana vola sandoka iray alina ampolony koa tany amin’izy ireo.
“Niainga avy amin’ny fahaverezan’ny basy Kalachnikov iray ana zandary iray miasa ao Fenoarivo Atsinanana very ny 20 febroary 2017 lasa teo no niaingan’ny famotorana ka nahafahana nanao ny famotorana ireto zandary roa lahy ireto”, hoy ny fanazavan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritra Analanjirofo, ny Kly Razafindramiaraka Château Brillant, momba ny fahatrarana ireto zandary niray tsikombakomba tamin’ny jiolahy ireto. Jiolahy raindahiny ikoizana amin’ny fanafihana mitam-piadiana ity tratra niaraka tamin’ireto zandary roa lahy ireto. Nandritra ny famotorana, niaiky izy roa lahy fa niray tsikombakomba tamin’ity jiolahy tratra ity. Nitohy ihany ny fanadihadiana ka niafara tamin’ny fisavana ny tranon’izy roa lahy. Mbola nahitana vodim-basy sy bala marobe hafa tsy an’ny zandary niaraka tamin’ny vola sandoka mitentina 110 000 Ar tao an-tranon’izy ireo. Tsy nahitana irony milina fanontana vola irony kosa anefa tao an-tranon’izy roa lahy, araka ny fanazavana hatrany. Nahazo vahana rahateo ny fanafihan-jiolahy izay nifanindran-dalana tamin’ny fitsaram-bahoaka tany amin’iny faritra Analanjirofo iny.
Nambaran’ny Kly Razafindramiaraka Château Brillant fa “tsy natao hialokalofan’ny jiolahy ny fanaovana zandary ka tsy afaka hanafina izany toetra tsy mendrika ataon’ny zandary eo ambany fifehezanay izany izahay. Heloka bevava izao nataon’izy roa lahy izao ka tsy maintsy hatolotra ny fampanoavana izy ireo. Tsy maintsy ampitoviana amin’ny olona rehetra nandika lalàna”. Misahana ny famotorana ity raharaha ity ny zandary misahana ny fikarohana heloka bevava ao Toamasina.
Kolikoly sy fahafantarana olona…
Taratry ny kolikoly sy ny fahafantarana olona ny raharaha toy izao fa hatramin’ny olona tsy tokony hanao zandary aza, tafiditra. Efa misy ihany ny fanadihadiana eo amin’ny lafiny ara-moraly mialoha ny handraisana ireny mpianatra ho zandary ireny any amin’ny sekoly, saingy araka ilay fomba fiteny hoe “saonjo iray lohasaha, tsy ilaozan’izay mamarara”. Misy ihany anefa ny tsindry bokotra sy ny fampidirana olona an-tsokosoko? Miezaka ny eo anivon’ny foibem-pibaikoana manafoana ny kolikoly, saingy eo hatrany ireo mahita lalana ambanin’ny tany. Tsy vitan’izany fa lasa sehatra fitadiavana asa koa ny fanaovana zandary sy miaramila ary polisy ka na ny olona tsy tokony hanao izany aza, manao izay fomba rehetra hidirana amin’izy ireny.
Manaratsy endrika ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena iray manontolo ny fihetsika tsy am-piheverana sy ny hadalan’ny zandary sasantsasany toy izao. Tsy midika akory izany hoe ny fianakaviamben’ny zandarimaria rehetra no manao fihetsika tsy voahevitra toy izao. Misy tokoa ny ezaka ataon’ny zandarimariam-pirenena amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Nanamafy hatrany, araka izany, ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ramiandrisoa Jean Dieu Daniel, fa tsy maintsy misy ny fanadiovana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ho fampiharana ny fanamby napetraka. Tsy natao hialokalofan’ny mpanao ratsy koa ny zandarimariam-pirenena. Midika izany fa rehefa vandana dia kary.
J.C sy Sajo /Sary : Sajo